ဘယ်ကုမ္ပဏီမယ့် PVC အားကစားကြမ်းပြင်ပိုကောင်းပါသလဲ - တရုတ် Shijiazhuang Yichen ပလတ်စတစ်ကြမ်းပြင်
အစိုင်အခဲကျောခိုင်းလျက် PVC ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စီးရီး
PVC Wave ကိုစီးရီး
ဘယ်ကုမ္ပဏီမယ့် PVC အားကစားကြမ်းပြင်ပိုကောင်းပါသလဲ
PVC အားကစားကြမ်းပြင် PVC ပစ္စည်းများ အသုံးပြု. အားကစားမြေပြင်များအတွက်အထူးတီထွင်ကြမ်းပြင်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသကအဓိကကုန်ကြမ်းထို့နောက် Filler, ပလတ်စတစ်, stabilizer, အရောင်နှင့်အခြားအရန်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းအဖြစ် PVC နှင့် Co-ပေါ်လီမာ resins သုံးပြီးတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်စာရွက်အလွှာပေါ်တွင်ခြစ်အပေါ်ယံပိုင်း technique ကိုသို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်အပေါ်ယံပိုင်း, extruding သို့မဟုတ်စာနယ်ဇင်း technique ကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအခါအရာကုမ္ပဏီ၏ PVC အားကစားခင်းပိုကောင်းပါသလဲ Shijiazhuang Yichen အားကစားပလတ်စတစ်ကြမ်းပြင် Co. , ၏အားကစားအခင်း, Ltd မှအဆိုပါအခင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏လက်မှတ်လွန်ပြီစသည်တို့ကိုပြောင်ပြောင်တောက်သောအရောင်, ရှင်းလင်းသောပုံစံနှင့် texture, ပွင့်လင်းသောအလွှာများနှင့် antislip ကောင်းတစ်ခုအင်္ဂါရပ်, ထိတ်လန့်စုပ်ယူမှုရှိပြီး, အစိမ်းနှင့်အ Eco ဖြစ်ပါသည် -friendly ထုတ်ကုန်။ ဒါဟာဒါ့အပြင်အဆိုပါ PVC အခင်းရဲ့ installation ကိုအလွန်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေစသည်တို့ကိုဆေးရုံ, သူငယ်တန်းကဲ့သို့ထိုကဲ့သို့သောအမြင့်ဆုံးယာဉ်အသွားအလာဧရိယာအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုအတူနေရာတွေ, များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သာ Self-အခုလဲကွန်ကရစ်အတူက install လုပ်ထားရနိုင်ပြီး, တပ်ဆင်ခြင်းစဉ်အတွင်းကြီးတွေဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Ltd. , Shijiazhuang Yichen အားကစားပလတ်စတစ်ကြမ်းပြင် Co. , PVC အားကစားအခင်းတစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, တိုင်းဖောက်သည်တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီထုတ်ကုန်အားလက်ခံတွေ့ဆုံသေချာ, တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သာလွန်ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးအာမခံချက်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရောင်ခြားနားချက် (အတူတူသုတ်), သိုးမွှေးအစွန်, ကြာရွက်အစွန်း, ပူဖေါင်း။ နေသောနေရာ, မညီမညာဖြစ်နေသောအထူ, အနံ့နှင့်အခြားမစုံလင်ပြဿနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ အားလုံး Yichen ထုတ်ကုန်စက်ရုံမထွက်ခွာမီအရည်အချင်းပြည့်မီလက်မှတ်နှင့်အတူတံဆိပ်ကပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ထုတ်ကုန်ကိုယ်တိုင်ကများအတွက်အာမခံ (အမြင့်ဆုံးအဆုံး) ဘုံအရည်အသွေးကို2နှစ်6နှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ (ထိုအထူးစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များနှင့်အရည်အသွေးအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လျှော့ချရေး, တပ်ဆင်ခြင်း, ဆင်းရဲသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မှလွဲ. ။ )
Shijiazhuang Yichen အားကစားပလတ်စတစ်ကြမ်းပြင် Co. , Ltd မှအဓိကထုတ်ကုန်: ပလပ်စတစ်ကြမ်းပြင်, PVC အခင်း, အားကစားအခင်း, ခရမ်းလွန်စီးရီးခင်း, တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစသည်တို့ကိုခင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သာပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲမှာ, ဒါပေမယ့်လည်းနိုင်ငံခြားစျေးကွက်အတွက်ကြိုဆိုကြသည်မဟုတ်။ Yichen ကြမ်းပြင်စသည်တို့ကို, ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေါ်မှာငါတို့ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ clients များနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပါတယ်
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-10-2015
Shijiazhuang Yichen အားကစားပလတ်စတစ်ကြမ်းပြင် Co. , Ltd မှ
E-mail ကို: yichendiban@163.com
အားကစားပလပ်စတစ် FL ကိုရှေးခယျြဖို့ကိုဘယ်လို ...
ယနေ့ပလပ်စတစ်အခင်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အလင်းခန္ဓာကိုယ်အလှဆင်ပစ္စည်းသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်ရေပန်းစားသည် ...
ဘယ်ကုမ္ပဏီမယ့် PVC အားကစား ...
PVC အားကစားကြမ်းပြင် PVC ပစ္စည်းများ အသုံးပြု. အားကစားမြေပြင်များအတွက်အထူးတီထွင်ကြမ်းပြင်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးပြုလုပ် PR ဖြစ်ပါတယ် ...